रुरु हाइड्रोको आईपीओ खुल्यो, कसले कति गर्न पाउँछ आवेदन ? | Notebazar
रुरु हाइड्रोको आईपीओ खुल्यो, कसले कति गर्न पाउँछ आवेदन ?
काठमाडौ । ७फाल्गुन, २०७७, शुक्रबार / Feb 19, 2021 07:35:am
रुरु जलविद्युत परियोजनाले फागुन ७ गतेदेखि प्राथमिक शेयर जारी गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित गुल्मीका स्थानीय बासिन्दाका लागि ४ लाख ७ हजार ७०५ कित्ता शेयर जारी गरेको हो ।
उक्त शेयरमा फागुन ७ गतेदेखि छिटोमा २१ गतेसम्म र ढिलोमा चैत्र ८ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ४ लाख किता सम्मका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
आईपीओ निष्काशनका लागि कम्पनीले एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा तोकेको छ ।
कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको आईपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड-३ रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले आईपीओले पाएको ग्रेड ३ रेटिङले कम्पनीको वित्तीय अवस्था अधारभुत पक्ष औषतमा राम्रो भएको देखाउँछ ।
कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा असार २५ गते निवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको ७ महिनामा कम्पनीले शेयर जारी गर्न अनुमति पाएको हो ।